26-ka Juun Waa Maalinta Qarannimada Soomaliland By: Axmed Carwo |
26-ka Juun Waa Maalinta Qarannimada Soomaliland By: Axmed Carwo
Waa qarannimo 55tan jirsatay, waa da’ kolka loo eego cimriga aadmiga laakiin waa shabaab kolka loo eego cimriga dawladaha. Maanta waxa inala gudboon inaynu qiimeheeda siino, walow ay jiraan duruufo aynu ku kala qaybsanay oo ka dhashay gaabis siiyaasi oo dhammaan aynu ka mas’uul nahay mucaarid iyo muxaafidba. Eedda ugu weyna ay leeyihiin Golaha Wakiilada ee shacbiga matalo oo noqday gaabis guntii.
Waa Golaha ku fadhiya Sharciga dib u eegidda qaybsiga kuraasta Golaha Wakiilada oon la’aanteed aan la helayn doorasho xor oo xalaal ah. Intaas u dhaafimaayo oo ma rabo inay damaashaadka inaga leexiso iyo maalintii aynu dalkeena ka xorreynay gumeysi aan diin iyo dhaqan iyo midab midna inala wadaagin ee aynu ku luuqaynaynay: waa ayaantii maaloodigii meesha daran ka yimid aynu ka dhoofinay dalkeena Soomaliland. Maalin farxaddu ina mideysay.
Waa Ramadaan iyo Jimce ee aan ku soo afjaro duco iyo Aalle ka cabsi. Allow quluubtayada isku soo duw, Alle nabada noo adkee, Allow naga dhig kuwa isu dulqaata, is cafiya, isu naxa, is tusa xaqqa, iska waaniya qaladka, is toosiya oo is tilmaama iyagoon is caayeen, is huruufeyn, is ceebeynayn, Allow madaxda iyo masuuliinta ku hadee xaqqa iyo tubta toosan, Allow ka dhig shacbiga kuwa arka wanaaga, kuwa ka kora eexda qabiil iyo dacaayadda beenta ah. Allow Islaamka dhammaan meesha dab ka baxaayo bakhtii oo u gogol gogosha nabadda, Allow inta baahan u gargaar, inta xanuunsan caafimaad sareecan ah sii. Allow raxmadaada u shub, Allow barakada bishan soon na waafaji, allow naga yeel kuwa aad ka xorreyso naarta, Allow maytidayo iyo tan islaamka u nacariiso. Allow Inankii Maxamed oo Ramadaantii hoer caafimaad qabay haatana agtaada u dheeelmaday u naxariiso, qabriga u waasici, u nuur ugana dhig beer ka tirsan fardawsta sare. Allow baari, waalidkii adeeca oon dalabkayo aax marna ka odhan, oo naftiisa taayada ka hor mariya ayuu ahaa ee Allow ugu naxariis jaceylka uu noo qabay, anagana naga dhaaf waxaanu ka gaasirnay. Wa salalaahu calaa siyidaana wa nabiyaana Maxamed caleyhu salaam.